Ukuze sibe njengoJesu othile, akusho ukuba. Phela, noma kunjalo, futhi ukuphila kusadingeka ukuphila kwakhe. Ben Reyli wayehlale ukukopisha nje, ngisho best, kodwa lokho kwadingeka akhuthazelele, has zincane izinto esifana ngazo ukuphila Peter Parker.
Bendzhamin Reyli (I-Scarlet Spider) kubhekwa Clone yimpumelelo kakhulu Spider-Man. Rumour kwadingeka ukuthi ukubukeka kwakhe, enesibopho izakhi ngomuntu, nge wrestling omuhle - the Ujakalasi. Inhloso kwakuwukuba ukubhubhisa Peter Parker. Futhi ukubheka imiphumela yomsebenzi wakhe, ukuthi uyeba le-Spider-Man futhi amyise ngenkundla yezemidlalo, "Shay." Kube kanti umhlangano wabo wokuqala we izicabucabu ezimbili.
Phakathi nempi they cishe abulalane, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ukuba ayeke, ngoba siqaphela ukuthi kungcono ukusebenza ndawonye. Ngemva nje kancane kwalokho, uzama ukulondoloza Gven Steysi, le Scarlet Spider (Ben Reyli) uyafa. Okungenani, ngakho-ke kwabonakala Spider-Man, ngakho ngiyilahle isidumbu sakhe imfihlakalo ayizange kudalulwe.
Ben Reyli kuphela ababulawa. Kwaphela iminyaka eminingana ayephila kude-New York City. The guy ivaliwe futhi baphelelwa wakhe ukuzethemba, eqinisweni realized lowo he was nje ikhophi Peter Parker. Kodwa umngane endala Seward Treyner wambuyisela ekuphileni. Lokho wagijimela umsebenzi futhi wasiza kwezinyawo zakhe. Naye Benjamin ukhohlwe ukuthi Clone, futhi ngazizwa sengathi umuntu ephelele.
Umsebenzi omusha, Ben wahlangana Dzhaninoy Godbi, ekuqaleni akazange amnake. Kodwa lapho aqala ukuxhumana eduze, wathola ngokuphila kwakhe esikhathini esidlule. It kuvela ukuthi igama lakhe langempela - Elizabeth Tyne, futhi njengoba ingane yena Kwakunzima kakhulu. Yena Wayehlala eshaywa uyise, futhi ngolunye usuku yabona ukuthi kabaze baba lakho ukuma fojisa, kwashona ubasi. Ben nayo yanquma mawuvuleke, ngakho wathi okungukuthi Clone we-Spider-Man. Izimfihlo ukuthola guys eduze. Baqala ukuhlangabezana, kodwa sahlala ndawonye isikhathi eside - endaweni ethile emhlabeni ngonyaka. Ben Reyli abaphefumulelwe babengayazi ukuthi isitha liseduze kakhulu.
Iqiniso liwukuthi bonke kulokhu zahlupha uKhayini - omunye Clone Spider-Man. Wakwazi bamelele Ben kokushiya zeminwe (futhi ziyafana) emzimbeni yowesifazane wabulala. Ngemva kwalokho-ke bancishwa kuye Elizabeth, wazenza kwaba sekufeni kwakhe.
Buyela New York
Ngemva kwesikhathi esithile, Benjamin ifunda ungazizwa kahle Anti-May, ngakho kuyabuya e-New York. Ukuze abalekele inkinga nge isicabucabu yokuqala, unquma ukuba amhlangabeze futhi sichaze isizathu ukubukeka kwakhe. Peter Parker lokuqala amphathe izinsolo, kodwa kamuva owamukela Man, kanye nobuhlobo babo futhi babe imvelo ezinobungane.
Bayaqhubeka ukulwa nobugebengu, ngisho Ben dons suit efanayo. Umehluko njengoba ayegqoke izingubo zakhe kuyinto ijezi blue ne isithombe besicabucabu phakathi. Manje igama lakhe ihlukile - Scarlet Spider-Man. Kulesi sama kwadingeka alwe nge amashinga eziningi.
ukubambisana Kuphela akazange isikhathi eside, ngoba e-New York lapho Treyner Seward. Esingatha ezinye izivivinyo wabika Ben ukuthi uyena ngempela Spider-Man, kanye Parker nje Clone. Kuyinto ecasukile kancane, uPetru, futhi banquma ukuyeka isikhathi ukusebenza ndawonye.
Kamuva, ngenxa yokukhulelwa Meri Dzheyn, uPeter kwadingeka bayakhohlwa ubuqhawe. Ngakho-ke, kuba Scarlet Spider, simcele ukuba uhlale Spider-Man esikhundleni. Ben Reyli (Marvel) uyabajabulela nomunye hhayi ngokumelene yokuthi esikhundleni sakhe. Ugqoke cishe suit efanayo, kuphela logo spider yenzani ngaphezulu.
Nakuba Ben ukujwayela indima Peter Parker wanquma ukuhlola umngane wakhe. It kuvela ukuthi Seward Treyner uyindoda Norman Osborn, ongumfelokazi ngempela umdali wabo bonke ukufaniswa Spider-Man. Umgomo wakhe kwakuwukuba ukuletha umqondo Parker sika ukuba akholelwe ukuthi kubuye ikhophi. Futhi lo msebenzi Wamisa umngane wakhe ubudala Ben Reilly.
Ben Reilly ukufa. Amanga noma Iqiniso?
Inwebisa izinhlelo Osborne, kokubili spider abayitholayo. Bona ingxabano lapho Scarlet Spider, esehlanganise umzimba wakhe, uPetru, Ufika ayelimele kabi.
Kodwa akazange afe. Vele Benjamin uyaqonda ukuthi izwe kuphela omunye Spider-Man. Ngakho-ke, yena elinegazi kokufa kwakhe, waya e-Portland, okuyinto wahlela ukusebenza ngendlela ukuzihlanza esikoleni okuthiwa uHenry Jones.
Kunengqondo ukuphetha ngokuthi Clone Spider-Man ube ncamashi emakhono kanye namakhono:
Force. amandla angaphezu kwavamile ivumela Benu Reyli phakamisa izinsimbi ezingaphezu kuka amathani 5.
Lobubhalo. Ukuhamba kwe-Scarlet Spider kuchazwe imisipha nokunwebeka kakhulu kanye ezicutshini.
Ukukhuthazela. Lowo ababezinikela ukuba zigcine ukuhleleka emzini, akukho okukhiphayo. Nganoma yimuphi umzuzu, othile angase adinge usizo lwakhe. Awu, lokho kuyinto ehluke ezinzima ukulwa nobugebengu ngaphandle kokuphumula isikhathi eside.
Ukumelana umonakalo. Ngenxa amathambo eqinile futhi imisipha Ben Reyli okuthwala ukulimala ngokwengeziwe futhi umonakalo kunomuntu evamile. Ngaphezu kwalokhu komzimba Scarlet Spider regenerates. Yiqiniso, kubuhlungu kuye kunjalo kungenzeka.
Overreaction. Kalula nje, yingoba lo ikhono emvumela ukuba invulnerable kuya izibhamu noma ezinye izikhali.
Sverhchute. Ngesikhathi Scarlet Spider ayinakho amehlo ngemuva, kodwa kukhona okungcono - spider umqondo, okuyinto pre-umxwayisa nangemiphumela ingozi. Ngakho, it ugwema ukulimala eziningi.
Ngaphezu kwalokho, Ben Reyli kuyinto photographer omuhle. Lokhu ikhono njengefa kusukela Peter Parker. Izikhali usalelwe ingxube ukuthi sifana cobwebs. It ibekwe izigubhu akhethekile nabo emoyeni iphenduka ibe okuqinile kanye fibre okunamathelayo.
Umlingisikazi Lora Leyton: Biography, izithombe. amabhayisikobho amaningi kanye uchungechunge TV